Mutsva makuhwa nezvekuvandudzwa kweAirPods | IPhone nhau
Mutsva makuhwa nezvekuvandudzwa kweAirPods
Isu nguva pfupi yadarika takataura kwenguva refu nezvenhau dzekuti Apple inogona kunge ichigadzirira gore rino maAirPods. Zvinosetsa kana isu tichifunga kuti iwo mudziyo unonyanya kugadzirirwa kutiperekedza pakubuda kwedu kunze kwemusha, zvisinei, hatigone kubuda (kunze kwekunge uine vana kana imbwa). Iva zvazvingaite, mumwe wevanonyanya kukosha vanoongorora anonongedza kuti Apple ine zvinhu zvakawanda zvitsva mupfungwa muAirPods asi isu hatizozviona nekukurumidza sezvataigona kufungidzira mazuva apfuura. Pachave nekugadzirwa kweAirPods uye AirPods Pro, asi iyo AirPods Lite ingori kurota kwazvino.
Iwo akanakisa mafomu ekuita mafoni evhidhiyo
Muongorori ane mukurumbira weBloomberg, Ming-Chi Kuo anojekesa. Apple iri kushanda pane mamwe maPodPods 2 ayo ane ruzivo rwatisingazive chero parizvino kupfuura chokwadi chekuti zviri pachena kuti kambani yeCupertino inoronga kubatanidza dhizaini yeAirPod mune ese akasiyana. Dhizaini yazvino AirPods Pro ndiyo inokunda yakanyanya kupihwa saizi yayo diki ichienzaniswa neiya yapfuura, uye pamusoro pezvose tichitarisa kune kwese kwese ma "pads" ayo anova mukana mune zvekudzivirira nekunyaradza kwevazhinji vashandisi. Ini pachangu ndichapotsa dhizaini yetsika AirPods zvakanyanya.
Zvichakadaro, kutaura nezve AirPods Lite, Muongorori anonongedza kuti hatinyanye kufungidzira (sekuuya kwe "yakachipa-shoma" iPhone rimwe zuva) sezvo zvingangoita kuti ichauya pasi peiyo Beats brand, zvakare iri yeApple. Tichifunga nezvekubudirira kwaKoo pabasa rake rese zvakakosha kuti uzvione, kunyanya sezvo achifungidzira kuti zvigadzirwa izvi hazvizopinde mukugadzirwa kusvika pakati pegore rino mune akanakisa kesi, saka mikana yazvo yakarembera masherufu eApple Chitoro haana kujeka.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Mutsva makuhwa nezvekuvandudzwa kweAirPods
Zvese zviito zvaunogona kushandisa neTrackpad pane iyo iPad
Ungachinja sei scroll scroll ye iPad yako uchishandisa trackpad